4 Ihe ndi ahia nwere ike imuta na ihe omuma nke ubochi nne maka imeziwanye ubochi nke ubochi | Martech Zone
N'oge na-adịghị anya, ájá kwụsịrị site na mkpọsa Daybọchị Ndị Nne karịa ndị ahịa na-atụgharị ụbọchị Nna ha. Mana tupu ịtọọ ọrụ Father'sbọchị Nna na nkume, ndị ahịa ọ nwere ike ịmụta ihe ọ bụla site na mbọ ụbọchị nne ha nwere ike inyere ha aka ịkwalite ahịa na June?
Mgbe anyị nyochachara nlezianya nke ụbọchị ahịa 2017 na ahịa data, anyị kwenyere na azịza ya bụ ee.
N’ọnwa tupu Daybọchị Ndị Nne, ndị otu anyị chịkọtara data sitere na ndị na-ere ahịa ọnlaịnụ puku abụọ na narị anọ metụtara ịgbahapụ ụgbọ, ozi ahịa email, ntugharị na ahịa. E-tailers ndị anyị na-amụ nọ na ụlọ ọrụ ise - Uwe, Akpụkpọ ụkwụ & Nkeonwe; Ulo-ahia; Nri & Ọrinku ;u; Ngwaahịa na Ọrụ Egwuregwu; na Ndị Ọpụrụiche Na-ere ahịa.
Ihe omuma anyi n'okpuru na-enye nkọwa zuru ezu nke data ahụ, ebe a bụ isi ihe ole na ole ndị ahịa kwesịrị iburu n'uche ka ha na-agba ọsọ mkpọsa Father'sbọchị Nna nke 2017.
Ahịa Motherbọchị Ndị Nne Adịghị Elu Ruo Oge Ezumike
Mgbe ị na-azụ ahịa maka nnukwu ezumike nke ọnwa iri na abụọ na-enweta nnukwu ume na Ọktoba na Nọvemba, a pụghị ikwu otu ihe ahụ maka ụbọchị nne. Azụ ahịa kacha elu dị na Mee 8th, otu izu tupu ụbọchị nne. N'ụzọ na-akpali mmasị, ụbọchị kachasị ewu ewu maka ndị ahịa ịzụta na ekwentị mkpanaaka bụ na May 13th, nke na-egbubi ya nke ukwuu!
Maka ndị ahịa na - eme atụmatụ ụbọchị Nna ha, nnukwu mbido ụbọchị nne bụ inwe ndidi. N'ezie, ọ dị mkpa ịmalite ịgbalị itinye aka ụbọchị azụmaahịa Nna n'oge na-adịghị anya. Ma atụla ụjọ ma ọ bụrụ na ahịa anaghị eburu ruo ụbọchị ncheta.
Ntughari email kacha dị irè n’izu tupu ụbọchị nne
N’amaghi ihe, ubochi ahia kariri bu kwa ubochi nke email na-ere ahia na-emeghe onu ogugu kachasi elu.
N'ihi na Nna Day, jide n'aka na ị na-eme atụmatụ a "ikpeazụ ohere" themed email mkpọsa maka izu tupu June 18. Shoppers n'ụzọ doro anya ekele maka ndị a na-echetara maka'sbọchị Ndị Nne, na yikarịrị ka ọ ga-maka Nna Day nakwa.
Ọnụ ego ịhapụ aha na ụbọchị ndị eduga tupu ụbọchị nne
Desktop na mobile nwere ike ịbụ na ha kacha elu n'izu na-eduga na Motherbọchị Ndị Nne, ma otú ahụ ka ọnụego ịgbahapụ ụgbọ. N'afọ a, Mee 11 hụrụ ọkwa kachasị elu nke ụbọchị niile n'ime ọnwa na-eduga ezumike ahụ - 89% dị egwu.
Maka ụbọchị nna, gbalịa igbochi ọnụ ọgụgụ ndị a gbahapụrụ agbahapụ n'izu na-eduga na ezumike ahụ site n'inye onyinye ndị ọzọ. Ọ bụrụ n’inwere ike ịkwụ ụgwọ n’ezi, inyefe nkwa, ọ nwere ike inye aka belata nchegbu nke ndị na-azụ ahịa n’oge ikpeazụ na onyinye ha agaghị abịa n’oge.
Mụbọchị Tuesday bụ ụbọchị ndị kachasị ewu ewu n'ịzụ ahịa, na Satọdee Kachasị
Shobọchị Ndị Nne na-azụ ahịa na-eji ụbọchị izu ụka eme ihe maka nchọgharị, na izu ụka maka ịzụta. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbawanye ahịa n'oge izu ụka na-eduga na June 18, tụlee ịme ahịa ụbọchị izu. Dịka ọmụmaatụ, nkwalite oge 24 na Tuesday na-eduga na Father'sbọchị Nna nke na-enye ego na ịzụta niile, ma ọ bụ onyinye n'efu, nwere ike ịga ogologo oge iji bulie ahịa Tuesday.
Ebe ọ bụ na ndị mmadụ achọworị izu na izu ụka, ndị na-ere ahịa nwere ike ịgba ọsọ na ngwụsị izu nke na-echetara ndị mmadụ ka ha mee ịzụ ahịa ụbọchị Nna ha, ma ghara inye ha ihe mgbakwunye iji mee nke a.
Tags: 2017e-azụmahịaecommerceusoro ecommerceubochi nne
Mee 29, 2017 na 10: 57 PM
Chaị. Daalụ maka ịkekọrịta stats ndị a Terri! Nnọọ aka. Anọ m na-eche, oge nke ụbọchị ka dị irè karị mgbe ị na-ezipụ akwụkwọ akụkọ email?